အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ HUAWEI Petal Search ဆိုတာဘာလဲ?
အရင်ဦးဆုံး Petal Search ကို ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းတွေမှာ သုံးစွဲနေတဲ့ Apps တွေရဲ့ Gateway ကြီးပေါ့၊ Open Portal လို့လည်း ပြောနိုင်သလို Google Search နေရာ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတယ် ဆိုရင် မမှားပေဘူး။
HUAWEI အနေနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်တာ စာဖတ်သူတွေ သိပြီးသား အကြောင်းပြချက် ဖြစ်သလို Petal Search မှာ ဘာထူးခြားနေလဲ? ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မလဲ? ဆိုတာကို ပြောသွားချင်ပါတယ်။
Search Engine ဖြစ်တဲ့အလျှောက် User တွေအနေနဲ့ မိမိ သုံးစွဲလိုတဲ့ App ဖြစ်စေ နေ့စဥ် ရာသီဥတု အခြေနေ ၊ နေ့စဥ်သတင်းတွေနဲ့ အားကစား အစီစဥ်နဲ့ သတင်းတွေကိုပါ သိရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် တေးသီချင်း ၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုကိုလည်း ရှာဖွေဖို့ စုစည်းထားတဲ့ App လို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် AppGallery ကို Integrate လုပ်ပေးထားပြီး Petal Search ကတဆင့်ပဲ Download ဆွဲလိုတဲ့ App ကို ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။
Integraded with AppGallery
ဒီလို Functionality ပိုင်း စုံလာတဲ့အတွက် Finds App အမည်ရ Search Widget ကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး နောက်တမျိုး Petal Search Engine နဲ့ မောင်းနှင်ထားတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Find Apps ကတဆင့် Download ဆွဲလိုတဲ့ App အပြင် Update လုပ်ဖို့ သူကတဆင့် သွားလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး App Recommendation ကိုလည်း ရရှိနိုင်လို့ သုံးစွဲရ ပိုမိုလွယ်ကူစေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Search Engine ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို Hardware-based Security နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပြီး သုံးစွဲသူတွေအတွက် Privacy Check ၊ Security Vulnerabilities နဲ့ Malicious Behaviours တွေကို Check-up လုပ်ပေးမယ့် Function လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
AppGallery မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Applications အများစုကိုလည်း စစ်ဆေးပြီးသားဖြစ်လို့ Security ပိုင်းအတွက် ဂရုစိုက်ပေးထားတယ် ဆိုရမှာပါ။
ဒီတော့ ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မလဲ?
HUAWEI အဆိုရ HMS (HUAWEI Mobile Service) အသုံးပြုထားတဲ့ P40 Pro ၊ Mate 30 Pro ၊ nova 7i ၊ Y8p ၊ Y6p နဲ့ Y5p ဖုန်းတွေအပြင် MatePad Pro နဲ့ MatePad T8 အစရှိ ထုတ်ကုန်တွေမှာ သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။
Petal Search နဲ့ ဆက်စပ်လို့ စာဖတ်သူတွေကို အသိပေးလိုတာ HUAWEI နည်းပညာ တချို့ အကြောင်းပါ။
ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သလို Contact List ၊ Personal Data နဲ့ Apps တွေကို ဖုန်းဟောင်းကနေ အသစ်ဆီ အချိန်တိုအတွင်း ကူးယူပေးနိုင်မယ့် နည်းပညာ
ဒါကတော့ HMS ကို ကြေညာလိုက်တဲ့ နောက်ပိုင်း မိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်သလို GMS နေရာ အစားထိုး ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှာ လစဥ် သုံးစွဲသူပေါင်း ၄၂၀ သန်းကျော် အထိ ရှိနေပါပြီ။ HUAWEI အနေနဲ့ အပတ်စဥ် အသစ်၊ အသစ်သော App တွေကို ထည့်သွင်းပေးနေသလို တတိယ အကြီးဆုံး Marketplace ဖြစ်နေပါပြီ
သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုမို ပြည့်စုံမှုရှိအောင် မိတ်ဆက်လာတဲ့ Petal Search (Find Apps Search Widget) မှာ Experience တမျိုးတဖုံ ပေးစွမ်းဦးမှာဖြစ်ပြီး ရှာဖွေလိုက်တဲ့ App ဘယ် Source က လာသလဲဆိုတာပါ သိရမှာပါ။
အခုချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အပါဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၅ နိုင်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Petal Search – Find Apps Widget ဟာ ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း (၄၀) ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
HUAWEI အနေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အနာဂတ် ကာလတွေမှာ ပေးစွမ်းဦးမှာဖြစ်သလို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် AppGallery မှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ Device တွေမှာ သုံးစွဲနိုင်မှာပါ။
အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Link ကနေ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
HUAWEI Myanmar Press Release အား ဆီလျော်သလို တင်ဆက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Mid-range စမတ်ဖုန်းအနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ OPPO A92 မှာ ဘာထူးခြားနေလဲ?